Abantu Abalishumi Bonzakele Kwindlela Exhwithekisayo kuloliwe waseTokyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ulwaphulo-mthetho » Abantu Abalishumi Bonzakele Kwindlela Exhwithekisayo kuloliwe waseTokyo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • Ukuhamba ngololiwe • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Abantu Abalishumi Bonzakele Kwindlela Yokuhlaba kuLoliwe waseTokyo
Esi siganeko sibangele ukuphazamiseka okukhulu kuloliwe waseOdakyu, ngokusebenza kunqunyanyisiwe kwaye kwehle umgca kwizikhululo ezibini ezichaphazelekayo.
Indoda ephethe imela yaya kuloliwe waseTokyo.
Uhlaselo lwenzeka kumgaqo kaloliwe wase-Odakyu Electric ngolwe-Sihlanu.
Elinye lamaxhoba lenzakele kakhulu emva kokuhlatywa izihlandlo ezininzi.
Indoda iseluvalelweni lwamapolisa ngokuhlwanje emva kokuya a ukugwaza kwi-Tokyo Odakyu Electric Railway line uloliwe wabakhweli.
Ubuncinci abantu abalishumi benzakala kuhlaselo olwenzeka ngasekupheleni kwangoLwesihlanu e tokyoIndawo esemazantsi mpuma eSetagaya.
Abantu abalishumi bonzakele ngoqhushululu olwenzakeleyo kuloliwe waseTokyo
Ngelixa iingxelo zokuqala zibonise ukuba benzakele abantu abane kolu hlaselo, eli nani lonyuke laya kumaxhoba alishumi, ngokokutsho kweendaba zasekuhlaleni zikhankanya isebe lomlilo laseSetagaya.
ISebe Lomlilo laseTokyo lathi abasithoba kwabalishumi abalimalayo abakhweli basiwe kwizibhedlele ezikufutshane, ngelixa i-10 ikwazile ukuhamba. Bonke abo benzakeleyo bebesazi, amagosa esebe lomlilo athi.
Elinye lamaxhoba lenzakele ngokumasikizi emva kokuhlatywa izihlandlo ezininzi, amajelo eendaba asekuhlaleni axele ngemithombo yamapolisa.
Kwangoko emva kwesehlo, uloliwe wema phakathi kwezikhululo ezibini, umrhanelwa waxhuma esiya ebaleka ngeenyawo. Akukacaci kwangoko ukuba ngubani otsale umgaqo kaloliwe ongxamisekileyo.
Umrhanelwa ubalekile kuloliwe, eshiya ngasemva imela kunye nefowuni.
Esi siganeko sibangele ukufunwa, kunye nomrhanelwa oyindoda, kwi-20s yakhe, okokugqibela egcinwe ngamapolisa emva kokuba ezinikezele kwivenkile ekufutshane, exelela umphathi ukuba ungumenzi wobubi. Iinjongo zomhlaseli azikaziwa.
Ulwaphulo-mthetho olunobundlobongela alunqabile eJapan, kwaye uhlaselo luza nenkunzi kwisilumkiso sokhuseleko esomeleleyo njengoko ibamba iMidlalo yeOlimpiki.
Oktobha 20, 2021 kwi-13: 39
umfanekiso weskrini شات عراقنا شات صوتي umfanekiso weskrini شات عراقي دردشة عراقية
Oktobha 20, 2021 kwi-13: 25
umfanekiso weskrini صوتي دردشة عراقية جات العراق شات ذهب